Goorma ayaa la qaadanayaa kaniiniyada ilmo soo rididda?
Ka Hor Isticmaalka Kaniinka
Hubso inaad dareento inaad si buuxda wax u ogtahay oo aad u diyaar garawday ka hor intaadan ilmo iska soo ridin kiniiniyada.
1. Ka Hor Isticmaalka Kaniinka
2. Ka fiirsashooyinka
3. Talo guud
4. Samaynta Qorshe Amaan Ah
Intee in leegoo uurkaaga ah ayaad ku jirtaa? Cilmi baadhidy waxay muujinaysaa in dawada ilma soo ridku intabadan lagula taliyo uurarka ka horeeya 13 todobaad laga bilaabo muddadii caada dhiigaaga u dambaysay. Isticmaal xisaabiyaha uurka si aad u go’aamiso inta dheer aad aad tahay, laga bilaabo muddadii dhiigaaga caadada u dambaysay.
Idan lokacinka na ƙarshe ya fara a ko bayan haka:
Waxaad wali ka fiirsan kartaa kaniiniga ilmo soo rididda
Haddii aad leedahay IUD
Haddii aad ku haysato qalabka xakamaynta uurka ilma galeenka la geliyo gudaha ilma galeenka (tusaale wareega IUD ama borojestaroonka IUD) waa inaad iska saartaa. IUD waa in laga saaraa ka hor qaadashada kiniinka ilma soo ridka.
Hadaad la nooshahay HIV
Hadaad lanooshahay HIV, hubso inaanad sii xanuusanayn, oo aad qaadato dawooyinka aydhiska loo isticmaalo oo caafimaadkaagu uu haddii kale wanaagsanyahay.
Haddii aad ka walaacsan tahay gaarka ah
Haddii aad ka walwalsan tahay inaad iska soo rididdaada u dhigto sidii ugu macquulsan ee suuragalka ah, kaniiniga ilmo soo rididda ku hay carrabka hoostiisa halkii aad ka siilka siilka caafimaad, kiniinka, waa la arki karaa haddii lagu isticmaalay xubinta taranka. Wadama qaarkood, waa lagugu wargelin doonaa haddii kiniinka laga helay xubintaada taranka.
Hadaad naas nuujinayso
Hadaad naaska nuujinaysid, kiniinka misoprostol waxa uu sababi karaa shubanka ilmaha. Si tan la isaga ilaaliyo, naas nuuji ilmaha, qaado kiniinka misoprostol, oo sug 4 saacadood ka hor naas nuujinta mar labbaad.
Haddii dhiig yari kugu dhacdo
Haddii dhiig yaraan ku hayso (aad leedahay ayroonka oo dhiigaaga ku yar), aqoonso adeeg bixiyaha daryeelka caafimaadka kaas oo ka badan 30 daqiiqadoo fogaan ah jira oo ku caawin kara haddii aad u baahato. Haddii dhiig yaraan ku hayso, la tasho dhakhtar ka hor isticmaalka kiniinka ilma soo ridka.
Si fudud wax u cun (tusaale buskudka ama rooti waxay caawin kartaa yalaalugada).
Inuu qof ku xanaaneeyaa ku la joogaa waxay noqon kartaa mid caawimo leh.
Cab biyo badan dhammaan nidaamka oo dhan
ka feker qaadashadaibuprofen ka hor inta aadan isticmaalin misoprostol si uu u yareeyo xanuunka majiiridda.
Marka aad isticmaalayso kaniinada misoprostol , ha ahaato goob (sida gurigaaga) meel aad gaar ahaansho ku leedahay ood jiifsan karto ilaa dhawr saacadood ka dib markaad isticmaasho kaniinada haddii aad rabto.
Samee qorshe amaan ka hor isticmaalka kaniinada ilmo soo rididda xaalada haddii aad u baahato caawin caafimaad oo degdeg ah.
Samaynta Qorshe Amaan Ah
Sida waafaqsan Kongareyska Maraykanka ee Dhakhaatiirta-umulinta iyo Xanuunada-dumarka, ilmo soo rididda saddexda bilood ee hore waa midda ugu amaansan nidaamyada caafimaad. Sikasta ha ahaatee, waa inaad had iyo jeer u diyaar garawdaa gurmad caafimaad oo kasta. Ka feker su’aalahayaga hoose in la sameeyo qorshe amaan xaalada haddii aad u baahato.
Waa halkee xarunta caafimaadka gurmadka 24 saac ah ee ugu dhaw?
Waa inaad awoodaa inaad ku gaadho halkaas 1 saac gudaheed ama ka yar. (Haddii aad qabto dhiig yari, waa inaad awoodaa inaad ku gaadho halkaas 30 daqiiqo gudahood.)
Sideed ku gaadhi doontaa xaruntaada caafimaadka gurmadka?
Ma qofbaa kula joogi doona oo gaari kugu kaxayn kara? Ma waxaad qaadan doontaa taksi? Gadiid dadweyne? Imisaa kharash kugu kici doona oo ma la heli doonaa 24 sacadood? Xasuusnow, ma aha amaan inaad adigu gaariga u kaxayso isbitaalka muddada gurmadka caafimaad.
Maxaad u sheegi doontaa dhakhaatiirtaada?
Ilmo soo rididda caafimaad ama ilmo soo rididda guriga sharci ahaan ma laga manuucay meesha aad ku nooshahay? Maxaad ku dhihi kartaa dhakhaatiirtaada sidaa darteed ay fahmi caawinta aad u baahantahay, laakiin taasina qarinaysa sirahaaga? Waxaannu haynaa xoogaa talooyin ah haddii aad caawin uga baahantahay waxa aad dhihi lahayd.
Wadamada qaar, ilmo soo rididda caafimaad ama ilmo soo rididda guriga sharci ahaan waa mabnuuc. Tan micnaheedu waa haddii aad u baahato caawimo gurmad caafimaad, waa inaad ka feejignaataa waxa aad dhihi. Ilmo soo rididda caafimaad waxay leedahay astaamola mid ah dhicinta dabeeciga ah (sidoo kale loo yaqaano dhicinta caadiga ah). Sidaa darteed, waxaad dhihi kartaa waxyaabo sida:
Ma hubo waxa dhacaya. Waxaan bilaabay uun dhiig bax.
Waan dhiig baxayaa, laakiin uma eeka dhiiga caadadayda caadiga ahayd.
Waxaan si kadis ah u bilaabay uun dhiig bax oo waxaan ka baqayaa inay wax khaldanyihiin.